driving licence Archives - Nagarik Today
होम » driving licence
अब ड्राइभिङ लाइसेन्स नवीकरणको अवधि १० वर्ष
by नागरिक टुडे मंसिर २९, २०७८
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि १० वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ । अहिले पाँच वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा यातायात कार्यालयहरुमा थेगिनसक्नु भीडभाड हुने र स्मार्ट लाइसेन्ससमेत सहज बनाउन नसकिएको भन्दै १० वर्षे अवधि राख्न थालिएको हो ।
त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्रस्तावित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ मा लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो ऐन जारी भएपछि अहिले पाँच वर्षमा गर्दै आएको नवीकरण १० वर्षमा गरे हुनेछ।
अहिले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका लागि यातायात कार्यालय नै पुग्नुपर्ने भएको कारण यातायात कार्यालयहरुमा भीड हुने गरेको छ। चालकहरुले ट्रायल पास गरेर पनि नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि एकवषएभन्दा धेरै कुर्नुपर्ने र नवीकरण गराउनेले पनि एक वर्षभन्दा बढी कुर्नु परेकोले १० वर्षे अवधि राखेमा केही सहज हुने सरकारी बुझाई छ ।
विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले नवीकरण गर्न निवेदन दिनेहरुले र ट्रायल पास गरेकाहरुले रसिद बोकेर मात्रै गाडी चलाउनु परेको छ । यसरी लाइसेन्स पाउन नसकी रसिद बोक्नेहरुको संख्या करिब ६ लाख रहेको विभागले जनाएको छ।
मंसिर २९, २०७८0comment
६ महिनापछि खुल्यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन
by नागरिक टुडे कार्तिक ९, २०७८
यातायात व्यवस्था विभागले ६ महिनापछि नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को आवेदन खोलेको छ । गत वैशाख १६ गतेदेखि महामारीको कारण देखाउँदै बन्द गरेको आवेदन प्रणाली सोमबमार रातिबाट खुलेको विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालका अनुसार सोमबमार रातिबाट आवेदन प्रणाली खुला भएको र अब नियमित रुपमा फारम भर्न सकिने बताए । कोरोनाको कारण देखाएर लामो समय आवेदन रोकेका कारण नयाँ चालकहरु समस्यामा थिए ।
प्रवक्ता भुसालका अनुसार अब दैनिक रुपमा कार्यालयको कोटा निर्धारण गरेर दैनिक रुपमै आवेदन लिन थालिएको छ । कार्यालयहरुले आफ्नो क्षमताअनुसार कोटा तोकेर आवेदन खुलाएका छन् । ‘विगतमा जसरी ‘भिजिटिङ मिति’ तोकेर असीमित आवेदन लिदैँनौं,’ उनले भने,’दैनिक रुपमा कोटाअनुसार भोपल्टको भिजिट मिति दिन्छौं, पहिले आवेदन दिएका धेरै जना अहिले पनि परीक्षा कुरिरहनुभएकाले उहाँहरुलाई प्राथमिकता दिने योजना छ ।’
कार्तिक ९, २०७८0comment
पहिलेभन्दा सजिलै पास हुने नयाँ लाइसेन्स प्रणालीमा के-के छन् व्यवस्था?
by नागरिक टुडे कार्तिक ८, २०७८
यातायात व्यवस्था विभागले गत साउनदेखि लागू हुने गरी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षाका लागि नयाँ मापदण्ड व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिलेसम्म यातायात कार्यालयहरू पुरानै प्रणालीअनुसार लिखित तथा ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। गत वैशाख १५ गतेदेखि कोभिड जोखिमका कारण लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा स्थगन गरिएको थियो। परीक्षा सञ्चालनमा आउँदा आवेदन दिइ बायोमेट्रिक गरिसकेका, लिखित परीक्षा दिइ ट्रायलमा संलग्न हुन बाँकी र एक पटक प्रयोगात्मक परीक्षा अनुत्तीर्ण गरी बसेकाका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार हुने विभागले बताएको थियो। अब यही साताको अन्तिममा भने यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ लाइसेन्सको आवेदन खुला गर्ने जनाएको छ। नयाँ आवेदन दिनेहरूका लागि भने नयाँ प्रणाली लागू हुने विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले जानकारी दिएका छन्।
नयाँ प्रणालीमा के व्यवस्था छ?
निर्देशिकामा वर्ग ‘क’ (ए) मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ‘ख’ (बी) कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स लिने सहज व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाको दफा ५ (२) बमोजिम वर्ग (क/ट), (ए/के) र वर्ग ‘ख’ (बी) का लागि लिइने लिखित परीक्षाका लागि ५००/५०० वटा प्रश्नको दुइटा प्रश्न संग्रहसमेत विभागले सार्वजनिक गरेको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार लिखित परीक्षामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, ट्राफिक नियम पालना तथा सवारी साधनको प्राविधिक पक्ष सम्बन्धी सामान्य व्यवहारिक ज्ञानका विषय समेटी १०० पूर्णांकको प्रश्न सोधिनेछ। यसमा चार/चार अंकका २५ वटा वस्तुगत उत्तर दिने प्रश्न हुन्छन्। लिखित परीक्षाको अवधि ३० मिनेटको हुनेछ। सम्बन्धित कार्यालयले विद्युतीय माध्यमबाटसमेत लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार परीक्षार्थीले ट्रायलमा ७० अंक ल्याए लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्छन्।
यसअघि विभागले परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गरिएको छ। अब कार्यालयले तोकेका तथा उपलब्ध गराएका सवारी मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। ट्रायलका लागि प्रयोग हुने मोटरसाइकल–स्कुटर पेट्रोलबाट चल्ने र कार, जिप, भ्यानहरू पेट्रोल, डिजेल वा ग्यासबाट चल्ने हुनुपर्नेछ। त्यस्तै सबै सवारी दर्ता प्रमाणपत्र अद्यावधिक भएको वा बहाल अवधि बाँकी रहेको तथा तेस्रो पक्ष बीमा भएको हुनुपर्नेछ। प्रयोगात्मक परीक्षा १०० पूर्णांकको हुनेछ। यसको अंकभार यसप्रकार छः
घुमाउरो आठ– २० अंक।
साँघुरो फलेक– १० अंक।
युटर्न– १० अंक।
ट्राफिक संकेत– १५ अंक
बम्प्स (उबडखाबड)– १५ अंक।
उकालो– २० अंक।
परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको समग्र मूल्यांकन– १० अंक
यस्ता छन् ट्रायलमा अंक काटिने अवस्थाहरूः
घुमाउरो आठमा एक पटकसम्म अंकित रेखा छोएमा ५ अंक घट्ने छ।
एक पटकसम्म खुट्टाले भुइँ टेकेमा थप ५ अंक घट्ने छ।
युटर्नमा टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबाले १० अंक घट्ने छ।
ट्राफिक संकेत पालना नगर्दा १५ अंक घट्ने छ।
उबडखाबडमा एक पटकसम्म भुइँमा टेकेमा ५ अंक घट्ने छ।
एक पटक सवारीको स्टार्ट बन्द भए ५ अंक घट्ने छ।
सवारी चलाउनु अगाडि सवारीको ब्रेक, टायर र ऐनाहरूको सामान्य निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। यसो नगरे ३ अंक घट्नेछ।
हेलमेटको लक नलगाई सवारी चलाएमा ४ अंक घट्नेछ।
असंयमित भएर सवारी चलाए ३ अंक घट्नेछ।
फेल हुने अवस्थाहरूः
एक पटकभन्दा बढी भुइँमा टेके अर्थात् स्टार्ट बन्द भएमा।
एक पटकभन्दा बढी अंकित रेखा छोएमा वा खुट्टा भुइँमा टेकेमा।
ठीक दिशाबाट ठीक तरिकाले ८ नबनाएमा।
सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा।
साँघुरो फलेकमा खुट्टाले भुइँ टेक्दा अर्थात् फलेकको लम्बाई पार गर्नु अगाडि नै सवारी फलेक बाहिर निस्किएमा।
उकालोमा तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा वा नरोकी अगाडि बढेमा वा रोकिएको अवस्थाबाट सवारीको पछाडिको टायर ६ इन्चभन्दा पछाडि सरेमा।
उकालो सकेर ओरालो झर्ने क्रममा तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा वा सवारी नरोकी अगाडि बढे फेल भइनेछ।
कार्तिक ८, २०७८0comment
सवारी चालक अनुमतिपत्र : संघ र प्रदेशको आ-आफ्नै नियम
by नागरिक टुडे अशोज १९, २०७८
यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्याविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने शतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ । संघीय ऐनमा पाँच–पाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०/१० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भएपनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले जनाउँदै आएका छन् । चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा संघ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्यौलता देखिएको छ । संघले एकथरी निर्णय गर्दा वा संघीय ऐनमा एकथरीको व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार जनाउँदै संघीय सरकारको ऐन, कानून र निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ ।
अनुमतिपत्रमा देखिएका समस्या प्रदेश सरकार आफैं पनि समाधान नगर्ने र संघीय सरकारको निर्णय पनि नमान्दा समस्या आइरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । अहिले अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर बाहेक बाँकी सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा सुधारका लागि विभाग तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश आफैंले निर्णय नगरेसम्म हामीले सच्याउन सक्दैनौं,’ उनले भने ।
संघीय ऐनसँग प्रदेश ऐन बाझिएकाले पनि पटकपटक समस्या आइरहेको छ । संघीय सरकारले संविधानअनुसार ऐन बनाउन बाँकी छ भने कतिपय प्रदेशले ऐन बनाएर लागू गरिसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ । प्रदेशले बनाएको कानून बाझिँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी समस्या देखिन थालेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
प्रदेशले एकल अधिकारको सूचीमा भएकाले संघीय कानूनको बेवास्ता गरेर ऐन बनाएपनि कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनको भनाइ छ । ‘यातायातका धेरै विषय अन्तरप्रदेश जोडिने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन,’ उनले भने । कानूनकै विषयमा कतिपय अस्पष्टता रहेको र कतिपय विषय कार्यान्वयन सजिलो नभएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
प्रदेशभित्र चल्ने सवारी साधनको भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो भने अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । कतिपय प्रदेशबीचको दूरी १५ मिनेट मात्रै भएको र प्रदेश प्रदेशबीच फरकफरक भाडादर कायम हुँदा कार्यान्वयन अप्ठेरो हुनसक्ने घिमिरेले बताए । ‘नयाँ बन्ने संघीय ऐनमा पनि यी कुरा समेट्न खाँचो छ,’ उनले भने ।
लामो समयदेखि अनुमतिपत्र नेपालीकरण रोकिएकाले सेवाग्राही हैरान छन् । पहिले एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपालीकरण गर्दा कतिपय कागजात नक्कली भएकाले कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए । त्यसयता अरु यातायात कार्यालयले पनि नेपालीकरण गर्न मानेका छैनन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा परेपनि ऐनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्दिन भन्न नमिल्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘दूतावासबाट सिफारिस ल्याउनु भन्न सकिएला तर कार्यान्वयन नै गर्दिन भन्न मिल्दैन ।’
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिन थालेको हो । पहिले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हस्तान्तरण भएपनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । कानून निर्माणदेखि कार्यान्वनसम्ममा दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक भएपनि आ–आफ्नो तरिकाले चल्दा सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन् ।
अशोज १९, २०७८0comment
by नागरिक टुडे भदौ ३०, २०७८
गत वर्ष जेठदेखि मोटरसाइकल चलाउन थालेका काठमाडौंको डाँछीका दिनेश न्यौपानेसँग अझै सवारीचालक अनुमतिपत्र छैन । नयाँ बानेश्वरस्थित एउटा स्वास्थ्य क्लिनिकमा कार्यरत उनी डेढवर्ष पहिलेसम्म सार्वजनिक बसमा ओहोरदोहोर गर्थे ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगराउँदा निजी सवारी साधन चढ्नु बाध्यता भएको उपत्यकावासी बताउँछन् । सवारीसाधन किनेर चढ्नु कतिका लागि रहर त कतिका लागि बाध्यता छ । सेवाग्राहीले चाहेर पनि चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छैनन् भने सडकमा पनि जाँच कम मात्रै भएको देख्न सकिन्छ । केही वर्ष पहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीले मुख्य मात्रै होइन सहायक सडकमा जाँच गर्ने गरेकोमा डेढवर्ष पहिले कोभिड देखिए पनि जाँच खासै भएको पाइँदैन ।
कार्ड अभावकै कारणले तत्काल नयाँ अनुमतिपत्रका लागि आवेदन नखुलाइने विभागले जनाएको छ । एकथरी सेवाग्राहीले फारम भर्न पाएका छैनन् भने अर्काथरीले फारम भरेर पनि परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छैनन् । परीक्षा पास गरेर वा नवीकरण गरेर अनुमतिपत्र नपाउनेको संख्या झण्डै सात लाख पुगिसकेको छ । अहिले तत्काल नआउने देखिएकाले त्यति बेलासम्म नयाँ आवेदन नखुलाइने विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बताए ।उनका अनुसार दशैंअघि नयाँँका लागि आवेदन खुलाउन नसकिने देखिएको छ । ‘नयाँ आउने कार्ड मास प्रिन्टरमा छापिएमा पुनः खुलाउन सकिनेछ,’ उनले भने ।
भदौ ३०, २०७८0comment